नोबेलमा शुरु भयो निःशुल्क प्रसूति सेवा - निष्पक्षखबर
नोबेलमा शुरु भयो निःशुल्क प्रसूति सेवा
विराटनगरः विराटनगरस्थित नोबेल शिक्षण अस्पतालमा निःशुल्क प्रसूति सेवा शुरु भएको छ । सरकारको आमा सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत नोबेलमा निःशुल्क प्रसूति गराउन थालिएको बताइएको छ ।
नोबेलले २०६७ फागुन २३ गतेदेखि नै निःशुल्क प्रसूति गराउँदै आएको भए पनि स्तरोन्नतिका लागि गत भदौ महिनाबाट यो सेवा स्थगित गरिएको थियो । अहिले पुनः निःशुल्क प्रसूति सेवा शुरु गरिएको नोबेल अस्पतालले जनाएको छ ।
स्त्री तथा प्रसूति विभागका प्रमुख डा.गेहनाथ बरालका अनुसार नोबेलमा निःशुल्क प्रसूति सेवासँगै प्रसूति गराउनेलाई प्रोत्साहनस्वरुप यातायात खर्च पनि दिइन्छ । उनका अनुसार प्रसूतिका क्रममा गरिने परीक्षण, बेड चार्ज, अप्रेसन चार्ज लगायत सेवा निःशुल्क छ । त्यस्तै, प्रसूति गराउन आउनेहरुलाई निःशुल्क सेवासँगै प्रोत्साहनस्वरुप यातायात खर्चबापत १ हजार रुपैयाँसमेत दिने गरिएको छ ।
सो अस्पतालको प्रसूति विभागमा डा. बराल, डा. शान्ति सुवेदी, डा. सीता पोख्रेललगायतका विशेषज्ञ डाक्टरहरुको टिम कार्यरत छ ।
आज पनि बढ्यो सुनको भाउ,चाँदीको घट्यो
आफैँ सवार बोलेरोले किच्दा १ यात्रुको मृत्यु